300W Inogadzira Solar Generator Integrated Lighting System China Manufacturer
Tsanangudzo:Solar Power Integrated Machine,Yakabatanidzwa Solar Power Generator,Solar Energy Integrated Lighting System
Solar Power Integrated Machine,Yakabatanidzwa Solar Power Generator,Solar Energy Integrated Lighting System
Home > Products > Solar home / DC system > Mini Grid System > 300W Inogadzira Solar Generator Integrated Lighting System
Zviratidzo zvezuva rinoshandiswa nemichina :
1. Simba remagetsi rinokonzerwa nezuva, pasina mafuta, steam, malahle uye mamwe mafuta, anonyatsogadzirisa simba rezuva, haafaniri kupedza peni, kunyatsovandudza hupenyu hwehupenyu munzvimbo dzisina simba.
2. Gomba rekunze rakasungirirwa ne-1.0MM plate, iyo inonyanya kukodzera kumunda kwemusango nekuda kwekuonekwa kwayo uye kuporesa.
3. Kushandisa polycrystalline (single crystal) yakakwirira-inobudirira yezuva, pane girasi yakagadzirwa neirasi yeruminiyumu yakarongwa, yakashongedzwa uye yakaisvonaka, yakasimba uye inoshanda, iri nyore kutakura uye kutakura.
4. Basa rekuyera iyo yakagadziriswa yakawanda yejenereta inoita kuti iwe uzive kushandiswa kwesimba chero nguva uye uchengetedze kushandiswa kwesimba.
5. Yakasungirirwa ne 12V5W LED yerima yezuva (5W LED simba rekuchengetedza mwenje = 55W bhiza rinowanzopenya, imwe chete inogona kushandiswa nguva dzose kwemaawa makumi mana, yakakodzera kushandiswa munzvimbo ipi zvayo yekuisa) uye inogona kushandura bhari ye LED maererano nemitengo yevatengi.
6, mazano emapenzi uye chigadzirwa chinogadzirwa, hapana chikonzero chekuisa nekugadzirisa, kushandiswa nyore, kuve nyore uye kukurumidza.
7. Kuvakwa mune bhatiri risina gadziriro, 12V / 3 yakabuda, 2 220V / (110V) yakabuda, inogona kushandiswa kune magetsi akawanda emagetsi, kuwedzera pamusoro uye kuchengetedzwa kwepamusoro kwepamusoro nekuchengetedzwa kwekuchengetedzwa, kudzivirirwa kwepamusoro, kuchengetedzwa kwemhepo uye mamwe mabasa.
8, USB yakatsaurirwa buck circuit, yakashongedzerwa zvakakwana kushandiswa kweti lithium mabheti, mafoni efoni nezvimwe zvinogadzirwa zvemagetsi.
9. Denga redzimba rinogadzirisa jenereta, rakanyarara, chiedza uye rakanaka, kutyisa-uchapupu uye guruva-uchapupu, masimba matsvuku, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye hutano, chinhu chakakosha mumiganhu isina simba.
Kukura kwemasviniro ezuva: 5W (17.5CM * 27CM), 10W (26.5CM * 35.5CM), 20W (35CM * 50CM)
Bhatteri usayizi: Nyaya iyi inogona kuiswa 24AH (19.5CM * 13CM * 15.5CM), 35AH (16.5CM * 12.5CM * 17.5CM) bateri.
Yakabatanidzwa Solar Power Generator